Otu onye ọkwọ ụgbọ elu nwụrụ, abụọ merụrụ ahụ n'ime 'misap' ụgbọ elu abụọ.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Otu onye ọkwọ ụgbọ elu nwụrụ, abụọ merụrụ ahụ n'ime 'misap' ụgbọ elu abụọ.
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
T-38C Talon supersonic ụgbọ elu ọzụzụ na Laughlin Air Force Base
Igwe ejima Northrop T-38 bụ ụgbọ elu ọzụzụ supersonic izizi n'ụwa, ma soro ndị agha ikuku US na-arụ ọrụ kemgbe 1959.
Ụgbọ elu US T-38C Talon supersonic ụgbọ elu abụọ tinyere aka na 'ihe mberede ụgbọ elu' n'okporo ụzọ ụgbọ elu. Laughlin Air Force Base, nke dị nso na Del Rio, Texas n'akụkụ oke US-Mexico, n'ihe dịka elekere 10 nke ụtụtụ n'oge obodo taa.
Dị ka nkwupụta si Laughlin AFB, otu onye na-anya ụgbọelu anwụọla ma merụọ mmadụ abụọ ahụ ahụ n'ụzọ 'miap'.
Otu onye ọkwọ ụgbọ elu nwụrụ n'ebe ahụ. E bugara onye ọzọ na Val Verde Regional Medical Center dị na Del Rio, gwọọ ya ma tọhapụ ya. Onye ọkwọ ụgbọ elu nke atọ metụtara na 'ihe mberede' nọ n'ọnọdụ dị oke egwu, a chụpụrụ ya na Brooke Army Medical Center na San Antonio. A na-egbochi aha ha ruo mgbe a ga-enye ndị ikwu ha nso.
"Ndị enyi m na-efunahụ bụ ihe na-egbu mgbu ma ọ bụ n'obi dị egwu ka m na-ekwupụta obi ebere m," Colonel Craig Prather, onye ọchịagha nke 47th Flying Training Wing kwuru.
"Obi anyị, echiche na ekpere anyị na ndị ọkwọ ụgbọ elu anyị tinyere aka na ihe ọjọọ a na ezinụlọ ha."
Eji ejima Northrop T-38 bụ ụgbọ elu ọzụzụ supersonic nke mbụ n'ụwa, na-ejekwa ozi na US Air Force kemgbe 1959. A na-ahazi ya maka nnọchi ya site na ụgbọ elu ụgbọ elu. Boeing T-7 Red Hawk na-amalite na 2023.